Wasaaradda waxbarashada & guddi baarlaman oo ka dooday Imtixaan mideysan! – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Wasaaradda waxbarashada & guddi baarlaman oo ka dooday Imtixaan mideysan! * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A warsame on 5th May 2015
Mareeg.com: Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya iyo Guddiga Arimaha Bulshada Baaralaanka ayaa maanta ka shiray Imtixaanka ardayda dugsiyada sare, kuwooda sanadkaan qalin jebinaya oo wasaaraddu dooneysa iney ka qaaddo imtixaan mideysan.
Wasiirka Waxbarashada dowladda federaalka ee Soomaaliya, Khadra Bashiir Cali ayaa dhawaanahan guluf ugu jirtay sidii imtixaan mideysan looga qaadi lahaa ardayda Fomr4-ka ee dhigta dugsiyada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya, arrinkaas oo welwel geliyey waalidiin badan.
Gudiga arrimaha bulshada Barlamaanka ayaa wasiirka waxbarashada, Khadra Bashiir, wasiir ku xigeenka iyo wasiiru dowlaha su’aallo ka waydiiyey qaabka ay doonayaan in wasaaraddu u qabato imtixaan midaysan.
Sida laga warqabo, dalladaha Waxbarashada ee ay hoostagaan inta badan Iskuullada Koonfurta iyo Bartmaha Soomaaliya ayaa shaki ka muujiyey sida loo qaadi karo imtixaan mideysan.
Dalladaha oo dhowr jeer la shiray wasaaradda ayaa sheegay iney ka cabsi qabaan in imtixaan mideysan oo xilligaan lagu degdego uu dhaliyo dhibaatooyin ammaan iyo kuwa ammaano.
Gudoomiyaha gudiga arimaha bulshada ee Barlamaanka Soomaaliya Dr. Cismaan Maxamuud Dufle ayaa tilmaamay in wasaaradda waxbarashada iyo gudigu ay isku af-garteen in sanadkan la qaado imtixaan midaysan isla markaana wixii farsamo ah ay ka wada shaqeeyaan.
“Waxaan iska waraysanay isla markaana si weyn u falaqaynay anaga iyo wasiiradda waxbarashadda hirgelinta qorshaha wasaaradu ay ku dooneyso in la qaado imtixaan midaysan sanadkan, waxaana isku afgaranay in muhiim ay tahay in qaado imtixaankaas” ayuu yiri Dr Dufle.
Wasiirka waxbarashada iyo Tacliinta sare ee xukumadda Soomaaliya, Khadra Bashiir Cali ayaa sheegtay ay tahay guul u soo hooyatay Ummadda Soomaaliya in sida ay tiri 24 sano kadib arddayda dalka laga qaadayo imtixaan mideysan.
Wasiiradda ayaaba u hadashay sida in imtixaan mideysan la qaaday, oo dowladdu ku guuleysatay arrinkaas, waxeyna tiri “Maanta waxaa sharaf ii ah inaan u sheego dadweynaha Soomaaliyeed iyo ardayda in 24 kadib xukuumadda Soomaaliya ay ku guulaysatay in la qaado imtixaan midaysan, wana guul weyn oo u soo hoyatay dowladda Soomaaliya, waxaan mahad gaar ah leh daladaha waxbarashada dalka oo kaalin lixaad leh ka qaadatay hirgelinta xoogga leh ee bar-baarinta ubaddakeena”.
Inkastoo Khadra sidaas tiri, haddana wasaaradda kama muuqato astaan haba yaraatee muujineysa iney qaadi karto imtixaan mideysan, marka laga reebo iney Macallimiin Kenyan ah u dhiibtay imtixaan ay dejiyeen dhowr Macallin oo Soomaaliya ah oo ay iyadu soo xulatay.
Imtixaan la dejiyey bishii hore ayaa loo qaaday dalka Kenya, iyadoo la sheegay in halkaas lagu soo daabacayo, hase ahaatee waxaa ka dambeeyey weerarkii Alshabaab oo diidan imtixaankaas ay ku qaadeen xarrunta wasaaradda Tacliinta Sare, iyadoo halkaas lagu dilay ku dhawaad 20 ruux oo isugu jiray shacab, shaqaale dowlo, askar iyo raggii Shabaabka ahaa.
Markii uu dhacay weerarkaas Alshabaab ku qaadday wasaaradda waxaa walwal badan soo wajahay waalidiinta Soomaliyeed ee dhalay ardayda la doonayo in imtixaanka laga qaado, iyadoo dallaaduhu aysan kalsooni ku qabin imtixaanka wasaaradda oo laga baqayo inuu suuqa galo.
Waxaa jira warar aan la xaqiijin oo sheegaya iney jiraan hay’ado dhaqaale la diyaar ah haddii dowladdu qaaddo imtixaan mideysan, taasoo sida la leeyahay xoojisay hamida madaxda wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya.